Inkululeko ye-Accrisoft: Uhlobo Oluhlukile lwe-CMS | Martech Zone
Inkululeko ye-Accrisoft: Uhlobo Oluhlukile lwe-CMS
NgoMsombuluko, Februwari 22, 2010 NgeSonto, ngoJuni 28, i-2015 UMichael Reynolds
Amawebhusayithi amaningi wanamuhla asebenzisa i-CMS (i-Content Management System) ukuvumela abaphathi bewebhusayithi ukuthi benze izinguquko, bathumele okuqukethwe, futhi baphathe iwebhusayithi. Lokhu kuqhathanisa nezinsuku zakudala zokubiza i-ejensi yakho yokwakha ukuze kwenziwe izinguquko, ezingabiza kakhulu futhi zibangele ukubambezeleka kuzibuyekezo. Ngenkathi ukuphathwa kwewebhusayithi phambilini bekungumbuso wabantu abanekhono eliphezulu kuphela (kwesinye isikhathi ababizwa ngokuthi “abaphathi bewebhu”), i-CMS ivula amandla okulawula kumalungu enhlangano angewona ezobuchwepheshe, njengomqondisi wezokumaketha, umsizi wezokuphatha, noma i-CEO.
At I-SpinWeb, sakha amasayithi ku- Inkululeko ye-Accrisoft ipulatifomu. IFreedom yi-CMS ehlukile kancane futhi inezinzuzo ezithile ezinhle kakhulu kunabanye babadlali. I-Indianapolis ibonakala iyidolobha leWordPress futhi ngibona izinkampani eziningi ziyisebenzisa njengeplatifomu yewebhusayithi. Akukho lutho olungahambi kahle nge-WordPress futhi empeleni kungokwami ibhulogi yomuntu siqu nesayithi lokukhuluma yakhelwe ku-WordPress. Kodwa-ke, inkululeko inezinzuzo ezithile ezihlukile uma kukhulunywa ngokusebenziseka, ukujula kwezici, nokusekelwa. Ngiyalijabulela iqiniso lokuthi sihlukile futhi sisebenzisa iNkululeko njengenkundla yethu yokuzikhethela, ikakhulukazi ezinhlanganweni ezinkulu ezifuna okungaphezulu kwezingxenyekazi zemithombo evulekile.
Uhlelo Lokulawulwa Kokuqukethwe olunokwesekwa
Into enhle ngeNkululeko ukuthi kunjalo kusekelwa ngokugcwele futhi igcinwe yi I-Accrisoft. Kunethimba lezentuthuko elizinikele elikhokhelwayo ukudala izici ezintsha, ukunweba amamojula akhona, nokuguqula impendulo yamakhasimende ibe yipulatifomu enika izinhlangano amandla okuxhumana online. I-Accrisoft inkampani enhle futhi ngibe nezingxoxo eziningi ezinhle ne-CEO UJeff Kline mayelana nekusasa leplatifomu futhi mayelana nebhizinisi eliku-inthanethi lilonke.
I-codebase yeNkululeko icindezelwa ngaphandle kuseva emaphakathi eqinisekisa ukuthi konke ukufakwa kuyahambisana. Ngamapulatifomu amaningi emithombo evulekile, imodeli ejwayelekile ukusetha amawebhusayithi ahlukene angama-50 + wonke asebenzisa ama-plug-ins, izinguqulo, nama-hacks ahlukile okuba yiphupho elibi ukuligcina njenge-ejensi. Inkululeko ivumela iSpinWeb ukuthi isekele futhi igcine inani elingapheli lamawebhusayithi ngaphandle kokukhathazeka ngokungahambisani phakathi kwawo. Ngoba yonke isoftware isingathwe efwini, amaklayenti ethu akudingeki akhathazeke ngokufaka isoftware kumakhompyutha awo. Bangamane bangene bese beya emsebenzini. Ngokwengeziwe, singathuthukisa amawebhusayithi amaklayenti ethu ngemizuzu embalwa lapho kukhishwa izinhlobo ezintsha zeNkululeko.
Isibonisi Somsebenzisi Ovelele
Inkululeko nayo ine-interface enhle kakhulu yomsebenzisi. Ngenkathi amanye amapulatifomu emithombo evulekile engadida abasebenzisi bokugcina, i-Freedom yethula isikhombimsebenzisi esihlanzekile, nesilula esenza kube lula kakhulu kubantu abangewona ezobuchwepheshe ukuphatha amawebhusayithi abo.
Amamojuli Olwandekayo we-imeyili, Amafomu, i-E-commerce nokuningi
INkululeko ihlinzeka ngamamojula amaningi anamandla ahlangana ngaphandle komthungo kwezinye izingxenye zewebhusayithi. Isibonelo, iNkululeko ifaka phakathi okwakhelwe ngaphakathi I-imeyili Marketing module, enikeza abanikazi bewebhusayithi isisombululo esiphelele sangasese se-imeyili esakhelwe ngaphakathi kuwebhusayithi. Kubandakanya amathempulethi, ukuhlela, ukuphathwa kwababhalisile, kanye nezibalo zokulethwa ezakhelwe ngaphakathi. Iphinde idonse imininingwane kusuka kwamanye amamojula ukuze abathengisi bakwazi ukuthumela imikhankaso kuhlu olwenziwe kwezinye izingxenye zesayithi, njengokubhaliswa kwemicimbi.
The Amafomu module kuNkululeko inamandla amakhulu kakhulu futhi iphikisana nabakhi bamafomu abazimele abatholakalayo namuhla. Ngenkululeko, abaphathi bewebhusayithi okungebona ubuchwepheshe bangakha amafomu ayinkimbinkimbi (noma alula) wezinhlelo zokusebenza, ukubhaliswa kwemicimbi, iminikelo, nokuhola ukubamba konke ngokuchofoza okumbalwa. Leyo fomu yefomu ingacubungulwa futhi ithunyelwe ngezindlela ezahlukahlukene noma ihlanganiswe nenqola yokuthenga yezinhlelo zokusebenza ze-e-commerce ezithuthukile.
Lakhelwe ngaphakathi Inqola yokuthenga kwi-Freedom futhi ivumela amabhizinisi ukuthi athumele isixazululo esihlanganisiwe se-e-commerce kumawebhusayithi abo futhi bathengise imikhiqizo ngomzamo omncane. Lokhu kungadlulela nasekubhalisweni kwemicimbi, kuvumela izinhlangano ukuthi zithengise ukubhaliswa emicimbini futhi zamukele ikhadi lesikweletu noma zikhokhele izinkokhelo ku-inthanethi.
Inkululeko inamamojula akhelwe ngaphakathi Ama-Blogs, Amakhalenda Omcimbi, Ukukhishwa Kwabezindaba, Ama-Podcast, Amaforamu, Izikhombisi-ndlela, i-RSS, Izinhlelo Zokusebenzisana, Ukukhokhisa, Nama-Polls, ukubala ezinye izinketho ezimbalwa ohlelweni. Ngokwengeziwe, amamojula amaningi angahlangana namanethiwekhi wokuxhumana ahamba phambili, okusho ukuthi izibuyekezo zewebhusayithi zingazithola zishayelwa ngokuzenzakalela ngqo ku-Twitter, Facebook naku-LinkedIn.
Inkululeko uhlelo oluphephe kakhulu. Akukhona kuphela uhlelo oluhlolwe kahle nolukhuni, kepha futhi inesici esihle kakhulu sokuphathwa kwabasebenzisi abaningi, esivumela abaphathi bewebhusayithi abaningi ukuthi babe nezindima namazinga okufinyelela ahlukile. Futhi inemodyuli yokuhamba komsebenzi, evumela abahleli ukuthi bavume noma benqabe izinguquko ngaphambi kokuthi babe bukhoma.
Amasayithi Wenhlangano Yobulungu
Ngingaba nomusa uma ngingavezi isixazululo esihle kakhulu seNkululeko sezinhlangano ezisuselwa kumalungu, njengososeshini. Imodyuli yeNkululeko yeNkululeko ivumela amaqembu asuselwa kumalungu ukuthi aphathe i-database ephelele yamalungu futhi avumele lawo malungu ukuthi agcine ama-akhawunti abo futhi enze izibuyekezo ngewebhu. Imodyuli futhi ivumela ukukhokhiswa kwelungu, i-CRM, ukumaketha, kanye nezokuxhumana. Amabhizinisi angayisebenzisa futhi njenge-database yamakhasimende futhi empeleni uhlelo lonke lwamakhasimende e-SpinWeb kanye nohlelo lokukhokha lilawulwa ngeNkululeko, kugcwaliswe ngama-invoice e-imeyili, ukukhokhiswa okuphindwayo nokukhokha online.
Njengoba ukwazi ukubona, inzuzo eyodwa enkulu yokusebenzisa iNkululeko ukuthi konke kusendaweni eyodwa. Ngaphambi kokusebenza nathi, amaklayenti ethu amaningi abesebenzisa amathuluzi ahlukile wokumaketha nge-imeyili, i-e-commerce, ukubhuloga, ukubhaliswa kwemicimbi, okuqukethwe iwebhu, nokuphathwa kobulungu. Ngemuva kokushintshela kuNkululeko, bathanda ukukhululeka kokusebenzisa nokusebenza kahle (ingasaphathwa eyokonga izindleko) kokuba nakho konke endaweni eyodwa.
Uhlelo Lokulawulwa Kokuqukethwe Kwenjini Yokucinga
Inkululeko nayo iyasizakala kakhulu ngezinjini zokusesha. Amawebhusayithi asuselwa kwinkululeko asebenzisa ama- “HURL” (Ama-URL afundeka ngabantu) okusho ukuthi okuqukethwe kungakhonjwa izinjini zokusesha kalula. Ama-HURL asiza ukukhulisa amazinga wewebhusayithi ezinjini zokusesha futhi abukeke kangcono kakhulu kubantu kunama-URL ajwayelekile aqhutshwa database kwezinye izinhlelo eziningi. Ama-HURL aseNkululeko enza ngezifiso ngokuphelele.
Njengomhlinzeki we-Accrisoft Solution Provider ogunyaziwe, iSpinWeb iyakwazi ukusebenzisa amawebhusayithi ngokushesha okukhulu futhi ngekhwalithi engaguquguquki ngaso sonke isikhathi ngenxa yokumiswa kwethu kweNkululeko. Amaklayenti ethu athanda ukusetshenziswa okulula, ukuhlanganiswa okunamandla, nezinga lokulawula abanakho manje lapho bephatha amawebhusayithi abo.
Tags: ebisoftinkululeko accrisoftCMSuhlelo lokuphatha okuqukethweimvu
Jun 20, 2011 ku-2: 52 PM
Ngiyayithanda i-Freedom CMS! Okuthunyelwe okuhle.